Voadika ny 04 Aogositra 2011 18:36 GMT
Herinandro vitsy lasa izay, ny Slovak Performing and Mechanical Rights society‘ (SOZA) – ny fikambanana mpiaro ny zo amin'ny fandikàna (copyright) ao amin'ny firenena – dia nanomboka nampadoa vola ireo lohamilina anaty tranonkala, indrindra fa ireo natao ho an'ny tanora mpankafy mozika, izay efa nampiditra lahatsary You Tube sy Vimeo ao amin'ny pejin'izy ireo :
Ny fikambanana moa dia nangataka [sk] 33.20 euro isam-bolana, na raha toa ka tsy manana taratasy fahazohan-dàlana avy amin'ny SOZA, dia manadoa onitra 99.6 euro. Na eo aza izany, dia nanizingizina [sk] mafy ilay bilaogera sy mpisolovava, Martin Husovec [sk] fa tsy misy lalàna mamela ny SOZA hampandoa onitra na amin'iza na amin'iza.
Andramana hoe hatraiza no fetra, nametraham-panotaniana ny SOZA raha toa ka ekena ny fandefasana ireo ROHY mankany aminà ampahan-kira. Araka ny fijerin'ny bilaogera iray, Michael “Smith” Dragan avy ao amin'ny Bolaogy Midra, dia namaly ny lehiben'ny sampan'asa misahana ny haino aman-jery ao amin'ny SOZA [sk] : “Inona no atao hoe ROHY?” i Juraj Grecnár bilaogera koa dia nisintona ny sain'ny mpamorona zava-baovao ao amin'ny SOZA “rohy hyperactive text” (ny rohy hypertext no lazaina eto), izay nahazo laza tampoka.
Tsy ireo mpamorona miasa amin'ny tranonkala ihany no nihetsika be. Fa na ireo olona tsotra ihany koa aza dia nanomboka namely ny tranonkalan'ny SOZA tamin'ny fanatsofohana lahatsary ary dia nifandray tamin'ireo mpanome fanampiana amin'ny alalan'ny antso ao aminy mha hitondra fanazavana [sk] momba ny, indraindray ankosotra fotsiny, ireo olana avy amin'ny taratasy fahazoan-dàlana.
Noforonina hatraminà pejy Facebook iray aza ho an'ilay tontolo nofinofy Slovak protection racket association (SOVA) [sk] – na Fikambanam-Piarovana Slovaky Mpanotra Vola – ho toy ny sehatra hifapizaràna vaovao, fifanakalozan-dresaka sy vazivazy. Noho izany, niforona nanaraka izany ireo sarisarin-dresaka tao amin'ny aterineto :
Afaka fotoana vitsivitsy, araka ny hevitry ny Bilaogy Midra, taitra tamin'ny “hery vaikan'ny” “fanehoan-kevitra tambabe” avy amin'ny vahoaka, ny SOZA ka nihemotra tamin'ny fanaovana fanambarana fa raha rohy “hypertext” sy “code” natsofoka… tsy ilaina ny taratasy fahazoan-dàlana avy amin'ny SOZA” [sk], sady narahana fialantsiny.
Na izany aza anefa, ny pejy FAQ [sk] (faritra natao ho an'ny fanontaniana sy valiny) ao amin'ilay vohikala dia mbola misy fitsipika mifehy mamaritra hoe rahoviana no ilaina ny taratasy fifanarahana amin'ny mpamorona (midika hoe soloin'ny SOZA tena) momba ny fandrohizana mankany aminà “fichiers media” voatahiry any amin'ireo lohamilina samihafa.
Tamin'ny fanadihadihana [sk] vao haingana nataon'ny SME, ny talen'ny SOZA dia namaritra fa na hatramin'izao aza dia “misy fomba fijery samihafa araka ny lalàna”, tsy hiala mora foana izany izy ireo nefa kosa hanao tsindry mba hanovàna ny lalàna. “Avy hatrany dia mitsipaka an'izany izahay, raha toa zaraina maimaimpoana ny votoaty any amin'ny tranonkala sasany.” “tsy mampino fa ny YouTube, na ny Google no marimarina kokoa, dia orinasa manankarena. Misy volabe ao anatin'io.”